I-plasticine yezandla zezingane: imibono engcono kakhulu
Umzali ngamunye ufuna ingane yakhe ibe umuntu onolwazi oluningi futhi odala. Ukuze kube sekugcineni, kubalulekile ukutshala ekuthuthukiseni ingane kusukela ebuntwaneni bokuqala. Kungcono ukunikeza isikhathi ekuthuthukiseni amakhono amahle amakhono ezandla, ukucabanga kanye nokucabanga. Ngempela, izingane zithanda ukudala into entsha neyingqayizivele! Ungasebenzisa noma yiziphi izinto zokwakha: iphepha elinemibala, amapensela, amaqoqo abadwebi njalonjalo. Kodwa ethandwa kakhulu yizobuciko beplastiki.
Namuhla, izimakethe zezimpahla zezingane zigcwele izinhlobo ezihlukahlukene ze-plasticine ezihlukahlukene, imibala, ubukhulu kanye nabakhiqizi. Izici eziyinhloko ze-plastiki enhle nekhwalithi ukuqina nokuhambisana kwayo, kanye nokukwazi ukubuyisela ngokushesha lezi zakhiwo ngemuva kokuqina. I-Plasticine ayifuni ukushiya izitashi ezikhishwa kanzima. Ama-oily omdaka wobumba kufanele asuswe kalula ngamanzi ajwayelekile.
Ngomncane kunazo zonke, i-plastiki esithambile futhi engekho kakhulu yezinyosi ezinemibala ekhanyayo ingcono kakhulu. Izinto ezinjalo zizobakhanga futhi zenze kube lula ukwenza izinto zokuqala zeplastiki.
Izingane ezindala ezengeziwe, eziye zazi kahle indlela yokwenza imodeli, ziyojabula nge-plasticzing evulekile ye-plastiki, ngoba ngosizo lwayo indalo yabo ingagcinwa kahle.
I-Plasticine - akuyona yonke into edinga ingane yokudala ngendlela yokwenza imodeli. Izingane zizodinga ezinye izinto ezingadingeki zithengwe, zingatholakala kalula kunoma iyiphi ikhaya. Okuthiwa:
Izinto zokuhlobisa (ubuhlalu, ubuhlalu, iziqu ze-sequin nabanye);
Ama-toothpicks, afanelana, amashubhu.
Yini engenziwa kusuka ku-plasticine
I-plasticine ngenxa yokweqa kwayo nokuhambisana kwayo inikeza ukwaziswa kokudala imidwebo ehlukahlukene ne-gizmos.
Izingane ezithandwa ikakhulukazi yizibonelo zezobuciko ezinjalo zePlastiki, njenge:
Abalingiswa bezinganekwane namaconto.
Futhi ezobuciko ezinjalo ze-plastiki ezinganeni zingaba nezinhlobo ezahlukene nobukhulu obuhlukile. Kungaba izibalo ezintathu-ntathu lapho ungaphinda ubuyeke khona isenzakalo esivela kumatheksthi (i-cartoon), noma izithombe ezingase zenziwe nasendleleni yesithathu noma ububanzi.
Indlela yokwenza isithombe se-plasticine
Dweba, noma kunalokho, ukudweba isithombe se-plasticine engavamile, kodwa inqubo yokuthakazelisa kakhulu.
Uma udala imidwebo yepulasitiki, ungasebenzisa amasu amathathu ahlukene:
Ukubukeka kubonakala kubulula kakhulu. Ingane inikezwa umdwebo owenziwe ngomumo (okushoyo, umbala), futhi, kancane kancane isakaza i-plasticine yemibala ehlukahlukene ebusweni, igcwalisa zonke izingxenye zesithombe.
Izithombe nezithombe ezenziwe nge-flagella flagella zibukeka zihle kakhulu futhi ezingavamile. I-Flagellar ingakwazi ukuhlobisa isithombe esivele silungisiwe noma kusuka kubo ukuze senze izibalo. Into esemqoka ukufundisa ingane ukwenza i-flagella.
Ikhono le-mosaic lilula futhi liqondile, kodwa uma ubeka ukubekezela okuncane nokubekezela, khona-ke ungadala ubuciko obuhle. Ukwakha i-mosaic, ingane ivele idinga ukudweba amabhola futhi ifakelele phezulu kwesithombe. Izakhi ezenziwe nge-plasticine balls zibukeka zihle kakhulu, uma zenziwe ngamabhola amancane.
Indlela yokwenza i-flagella
Njengoba sekushiwo ngenhla, i-flagella yindlela engcono kakhulu yokudala izihloko ezenziwe ngesandla. Ungakha ububunjwa obubunjwa obuhlukahlukene nobukhulu obuvela kubo. Futhi lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba ngale ndlela izingane zizokwazi ukuhlaziya ukubunjwa nobukhulu, zizokwazi ukuthola ukufana nokuhluka kwezinto, ukufanisa kahle imininingwane.
I-Flagellum ingalungiselelwa ngesandla. Ngenxa yalokhu, ingane izodinga ukufaka ucezu oluncane lweplastiki futhi luyibeke ibe umsila omncane omncane. Noma sebenzisa isiraya evamile yezokwelapha, okumele ukhiphe i-flagella flagella ende emincane. Izandla ezenziwe ngale ndlela zibukeka kahle futhi zihlukanisa inqubo yokwenza imodeli.
I-plasticine yobuciko ngendlela yezimbali - lena yindlela engcono kakhulu yokujabulisa umama wakho, ugogo noma udade, ngoba wonke amantombazane athande lezi zitshalo ezinhle futhi ezinamandla.
Kuhle kakhulu futhi kulula ukwenza i-plasticine rose. Kunezindlela ezimbili zokwenza lokhu:
Sithatha i-plasticine yombala ofanayo, senza i-flagellum ne-drop. Kusukela ku-flagellum, yenza ikhekhe eliyiphala, esiyibopha nxazonke. Ukuqala kwe-rose yethu kuyabekwa. Bese ugoqa i-flagellum eyodwa, uyixoqe uphinde ugoqe phakathi kwembali. I-flagella eyengeziwe ikhona, i-rosier nehle kakhulu i-rose.
Roll about 5-6 amabhola of the size efanayo (ungakwazi ngaphezulu). Ibhola ngalinye linikezwa ngesimo esicacile futhi lihlelwe ngokulandelana ukuze isakhi ngasinye sigqoke okudlule. Bese uwagcoba ngokucophelela ube yingxenye eyodwa. Sifaka ama-petals, futhi i-rose isilungile.
Akudingekile ukusebenzisa ubumba ngombala owodwa. Ungenza ubuhle obuhle-i-rose ngamacembe azo yonke imibala yobuningi.
I-plasticine dandelion. Senza umsila omude ophuzi. Gcwalisa, ubeke isakhiwo esiseduze nethange, imiphetho kufanele ibe yindlala njengokungenzeka. Ziyakulungiswa kangcono noma zilungiswe ngeziqu. Kusukela ohlangothini olude ohlangothini olulodwa senza i-fringe. Ungayinquma ngezikhali. Siphendulela imbali yethu futhi sithole uphawu oluhle kakhulu nolunhle lwentwasahlobo.
I-Camomile. Sithatha ubumba obomhlophe, susa umsizi, uwahlukanise zibe izingxenye ezilinganayo. Kubo roll roll. Khona-ke sinikeza uhlobo ngalunye lwe-petal, lufake ibhola luhlangothini olulodwa futhi luyichitha kusuka kwenye. Amapetali asakazeka embuthanweni, phakathi sibeka ibhola lombala we-orange, ihlelwe kancane futhi i-toothpick yenziwe ngamagundane. I-Camomile isilungile.
Izandla ngesimo sezilwane
Inkukhu. Ukuze uyidale ingane izodinga i-plasticine yemibala emithathu (ophuzi, obomvu, obuluhlaza), ubuhla beso, ipaki, ikhadi lekhadi.
Ake sicabangele uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo sokumisa inkukhu:
Kusukela epulasitiki ephuzi senza ibhola elincane (lokhu kuzoba ikhanda) kanye ne-oblong volumetric oval, okuyoba yi-trunk yenyoni yethu;
Sibumba amaphiko ahlotshisiwe avela eplasini eluhlaza bese siwafaka ezinhlangothini ezimbili kuya emzimbeni;
Kusukela kumbala we-plasticine wombala obomvu senza i-beak ne-scallop, ehlanganiswe ekhanda;
Kubuhlalu noma ubuhlalu amehlo;
Ukuthi inkukhu kufanele ibe nokuzinza, kufanele itshalwe kunoma yikuphi ukusekelwa.
Inhlanzi. Izinhlanzi ze-Aquarium zihlukahlukene, zimibalabala futhi zihlala zikhangayo. Futhi okubaluleke kakhulu, ukubuyisela kabusha noma iyiphi yazo kulula kakhulu ngendlela yezandla ze-plasticine. Izithombe zobuhle obunjalo zingabonakala ngezansi.
Singakwenza kanjani lokhu? Lolu hlelo lulula kakhulu:
Ibhola lepulasitiki likhishwe, lihlanganisa izinhlanzi zesikhathi esizayo;
Senza izinhlanzi nomsila;
Sibeka ndawonye lezi zingxenye;
Ubuhlalu (ubuhlalu) buzosebenza njengezinhlanzi;
I-trunk yenhlanzi ingahlotshiswe ngezici ezihlukahlukene.
Isibonelo sephethini ye-plastiki
Cabanga ukuthi ungenza kanjani isithombe noma usebenzise i- applique kusuka epulasitiki, usebenzisa isibonelo se-landscape ye-cosmic. Le nhloko ithandwa kakhulu yizingane, ngoba ukundiza kwefantasy akukhawulelwe nganoma yimiphi imingcele.
Ake siqale ukusebenza:
Amaplanethi: sithatha amabhola emibala ehlukahlukene (i-blue - Earth, ebomvu - Mars, emnyama - Saturn, njll). Senza kuzo imibuthano ephathekayo.
Ilanga lenziwa ibhola lombala ophuzi, imisebe ingasebenza njengemifino, i-toothpicks noma i-flagella flagella.
Umkhumbi wangaphandle. Yenza i-disc flat yebhola lepulasitiki, unamathisele umbala wombala ogqamile, bese unamathisela imilenze yomkhumbi (kusuka epulasitiki noma izinto ezingalungiswa). Kubuhlalu benza ama-portholes noma izibani zomsindo womkhumbi.
Zonke lezi zakhi zifakwe ebhodini (noma ume).
Kulesi sakhiwo, ungacabanga ngalutho: izilwane ezingaqondakali, izihambi, i-Earth-cosmonauts nezinye eziningi, eziningi.
Ngakho-ke, ukucabangela kwezingane akunamkhawulo futhi kuhlanganiswe, ukuze ingane ikhule futhi ikhule ngokugcwele, abazali baphoqelekile ukuba bamnike konke okudingekayo. I-plastiki - lena ingenye yezinto ezifinyeleleka kakhulu futhi ezibaluleke kakhulu zokuzibonakalisa komntwana.
Ibhayisikili yezingane Izitoli: ukubuyekezwa, amamodeli, imininingwane kanye nokubuyekezwa
Isisindo sabantwana ngezinyanga
Kuze kube nini izingane swaddle ziyize. Uneminyaka engakanani ubudala we-swaddle?
I-autumn ekuseni eqenjini eliphakathi. Isimo se-autumnal matinee
"I-China Isifundo" (Colin Campbell): ukubuyekezwa kanye nokugxeka
Freeman (isifonyo): Ukwakheka, ukubuyekezwa kwesicelo
Levitation Magnetic: Uhlolojikelele, izici nezibonelo
Izindlela UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki ukujwayela indima, nabalingisi ukulungele ukudlala yezidakamizwa?
Indlela Yokwenza "Yandex" ikhasi lasekhaya? Kanjani ukulungisa eliyisiqalo "Yandex"
Izingane ukudansa. Okubalulekile ukwazi abazali?
Isaka-Babel, "Red Cavalry": isifinyezo sezinto ukuhlaziywa, izinhlamvu